Seho vaovao efatra ao amin'ny watchOS 8 izay ho mora ampiasaina | Avy amin'ny mac aho
Seho vaovao efatra ao amin'ny watchOS 8 izay tena hahasoa antsika
Omaly tolakandro tamin'ny fampisehoana ny WWDC 2021, afaka nahita ny vaovao hampiditra ilay rindrambaiko vaovao azonay havaozina amin'ny fitaovan'ny Apple amin'ity taona ity izahay. Ny sasany amin'ireto zava-baovao ireto dia handeha any amin'ny Apple Watch, tafiditra ao watchOS 8.
Ary amin'izy rehetra ireo, misy efatra izay amin'ny farany dia mety ho ny tena ilaina indrindra ary ireo izay ampiasaintsika matetika matetika. Aleo atrehana izany: Ho an'ny ankamaroantsika dia zava-dehibe kokoa ny mahay mandefa a Biby gif avy amin'ny Apple Watch, fa afaka manokatra ny fiara miaraka aminy izahay. Mihoatra noho ny zava-drehetra, satria ny fisokafan'ny fiara dia mila mividy iray vaovao mifanaraka amin'ny rafitra. Ka andao hifikitra amin'ireo GIF mihetsika ...
Ao amin'ny fehezanteny omaly dia nisy fizarana iray hanolorana ireo vaovao ho hitantsika amin'ny fiambenanaOS 8. Angamba ho an'i Apple, ny tena zava-dehibe dia ny fampiharana Saintsaino hanampy anao hifantoka sy hiala sasatra, fampiharana Home nohavaozina mba hifehezana ny tranonao tsara lavitra noho ny tananao, fanavaozana ny fampiharana Wallet, sns. Na izany aza, misy ihany ny "kely" fiasa ho an'ny orinasa izay tena hahasoa antsika, tsy misy isalasalana.
1 Animation gifs
2 Timer isan-karazany
3 Mitadiava entana sy fitaovana
ny Animation gifs lamaody. Nilaza izy ireo fa sarina teny arivo ny sary. Ary raha mihetsika ilay sary etsy ambony dia lasa iray alina izy ireo. Na amin'ny resaka manokana na amin'ny resaka miasa (raha avelan'ny lehibenao izany), ireo GIF mihetsika dia lasa sakafonay isan'andro.
Ka amin'ny watchOS 8 dia afaka mandefa GIF mivantana avy eo amin'ny tananao ianao amin'ny alàlan'ny fampiharana ny Lahatsoratra toy ny azonao atao amin'ny iPhone. Midika izany fa azonao atao ny mitady ny sary mihetsika tsara indrindra azonao eritreretina ary alefanao amin'ny hafatra avy amin'ny Apple Watch.
Fiasa izay azoko antoka fa hampiasaina, indrindra rehefa miaraka amin'ny Apple Watch LTE aho ary tsy manana ilay iPhone eo an-tànako.
Ho fanampin'ny GIF, azonao atao ihany koa ny mampiasa Doodles, Dictation, ary emojis, izay mitovy hafatra amin'ny Apple Watch daholo. Azonao atao ny manoratra haingana, miteny na mampiasa emojis araka izay tianao hamoronana ny hafatrao nefa tsy ilaozanao ny efijery mitovy.
Toa bontolo ilay izy nefa tsy izany. Miaraka amin'ny fanavaozana vaovao dia afaka manana timer maromaro isika niara, ary mitazona fanisana zavatra maromaro indray mandeha. Tena ilaina raha mahandro lovia maro miaraka amin'izay ianao, ary te hifehy ny fotoan'ny zavatra tsirairay, ohatra. Hampiasa azy io koa aho, tsy isalasalana.
Mitadiava entana sy fitaovana
Hatramin'izao, ny rindranasa Find amin'ny Apple Watch dia voafetra amin'ny fitadiavana fifandraisana miaraka amin'ny alalana toerana. Amin'ny watchOS 8, azonao atao koa ny mitady singa sy ny fitaovana.
Toy ny amin'ny iPhone dia afaka mitady entana ianao izao (izy ireo no marika nanoratanao ny AirTag, ohatra hoe "lakilen'ny fiara"). Ary azonao atao koa ny mitady ny fitaovana izany dia miaraka aminao ID Apple. Tena hampiasaiko koa io, indrindra rehefa tsy mitondra ilay iPhone aho.
Ny assistiveTouch ao amin'ny watchOS 8 dia hanampy ny olona tsy mitovy amin'ny sandry sy ny tanana satria mamela ny fampiasana sandry iray fotsiny amin'ny Apple Watch. Io dia hahafahan'ny Apple Watch mahatsapa fihetsika tsotra amin'ny tanana fa tsy mifanerasera amin'ny efijery Apple Watch. Mampiasa ny fihetsiketsehana Ny namboarina dia afaka mamaly antso ianao, mifehy ny isa eo amin'ny efijery ary mampiseho menio fihetsika izay afaka miditra amin'ny Notification Center, Control Center, ary bebe kokoa ao amin'ny Apple Watch anao.
Amin'ny tranga misy ahy dia mety tena ilaina izany. Ary tsy hoe very sandry aho. Tsotra satria matetika no mitondra ny kitapoko any an-tanako ankavanana, ary ny Apple Watch any ankaviako. Rehefa nanana ny Apple Watch tany am-boalohany tsy nisy ny efijery "On On" foana aho dia tsy nokasihiko tamin'ny oroko ny famantaranandro indraindray hahitako ny efijery ...
Araka ny nolazaiko tamin'ny fampidirana, azoko antoka fa hampiasa (farafaharatsiny I) ireo endri-javatra vaovao raha vantany vao misy ao amin'ny Apple Watch misy azy ireo izy ireo, noho ny an'ny bombastic hafa, toa ny manokatra ny fiara na ny varavaran'ny tranoko amin'ny famataranandro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Seho vaovao efatra ao amin'ny watchOS 8 izay tena hahasoa antsika
ICloud + Private Relay dia tsy ho hita any amin'ny firenena sasany